सावधान ! यस्ता लक्षण देखिए मस्तिष्कघात हुन सक्छ • Health News Nepal
Brain health is important, कस्ता लक्षण देखिए मस्तिष्कघात हुन सक्छ ? डा.सुवास फुँयाल, न्यूरो इन्टरभेन्सनिस्ट, न्यूरो अस्पताल, बाँसबारी
काठमाडौंका ५५ वर्षीय सुशील पन्त (नाम परिवर्तन) को एक्कासी देब्रेपट्टिको हातखुट्टा चलेन । मुख बाङ्गो भएर बोली पनि लरबरिन थाल्यो । एमआरआई गरेर हेर्दा उनको दिमागको ठुलो नसा बन्द भएको थियो । उनी बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा पुगेको ८० मिनेटमा ‘न्यूरो इन्टरभेन्सन’ प्रविधिबाट उपचार गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । हात, खुट्टा, मुख बाङ्गो भएर लरबराएको बोली पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो ।
Neuro intervention technology for brain health
दिमागको बारेमा हालसम्म अनुसन्धानले मस्तिष्कघात भएको ६ घण्टाभित्र अस्पताल पुगेमा बन्द भएको नसालाई खोलेर बिरामीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिने देखाएको छ । तर, सन् २०१८ मा मस्तिष्कघात सम्बन्धी एक अनुसन्धानमा २४ घण्टाभित्र बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएर बन्द भएको नसालाई खोलेर पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सकिने कुरा थाहा पाएको उनले बताए ।
(रातोपाटी डटकमबाट )
Tags: Brain tumorMental HealthNeuro InterventionNeuro SurgeryNuclear Medicine
Pingback: नयाँ वर्ष #HappyNewYear2078 • Health News Nepal